Myanmar Public Health Cloud | Page9| Bank of Knowledge
For help, message to +1 - 234 - 207 - 2010
How to Download eBook?
Call 1 - 234 - 207 - 2010
Public Health (169) Research Methodology (150) Statistics (145) Epidemiology (139) Evidence-Based Medicine (50) Clinical Trials (23) Social Science (13) Environmental Health (12) Health Economics (12) Health Policy and Management (8) Publication (5) Nutrition (5) Research Ethics (3) Health Promotion and Education (2)
Myanmar Public Health Cloud ကို စတင်တဲ့ အချိန်ကနေ ယနေ့ တိုင် အားပေးလျက်ရှိတဲ့ MPHCloud Member များ အားလုံး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ … ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ကတည်းက စတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ Myanmar Public Health Cloud မှာ လစဉ် Public Health နှင့် သက်ဆိုင်သောစာအုပ်ကောင်းလေးများကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရရှိနိုင်အောင် စုစည်းပြီး တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ စတင်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ မှ ၂၀၁၈ ထိ (၅)နှစ်တိုင်တိုင် စာအုပ်အားလုံးကို မည်သည့် Fee မျှ ကောက်ယူခြင်း မရှိပဲ အားလုံးကို Free sharing ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခု အခါ Member အရေ အတွက် များပြားလာခြင်းကြောင့် ယခင် အသုံးပြုလျက် ရှိသော Free Hosting မှာ ဆက်လက် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်စဉ်ကြေး ပေးရသော Hosting ပေါ်သို့ ပြောင်းရွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ နှစ်စဉ်ကြေး များ ပါရှိလာသောကြောင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း Myanmar Public Health Cloud ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး Myanmar Public Health Cloud ကို Membership ပုံစံ ပြောင်းလဲရန်သာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ Membership ဖြစ်ရန် Myanmar Public Health Cloud ကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် Donation ပြုလုပ်ရပါမည်။ Donation Fee ကို သတ်မှတ် မထားပါ။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သလို အကြိမ် ကန့်သတ်ချက် မထားပဲ Donate ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Donation ကို အောက်ဖော်ပြပါ KBZ Account သို့ ငွေလွဲ နိုင်ပါသည်။ ငွေလွဲရာတွင် အကြောင်းအရာကို MPH Cloud Donation လို့ ဖော်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ KBZ Account U Win Khaing 02630102600139601 Donation ပြုလုပ်ပြီးပါက အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို ကျွန်တော်ထံ ပေးပို့ အကြောင်းပေးစေလိုပါတယ်။ •	Username •	Email Address •	Donation Amount အကြောင်းကြားရာတွင် အောက်ပါနည်းများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ •	webadmin@mphcloud.com သို့ အကြောင်းကြားခြင်း •	www.facebook.com/mphcloud သို့ message ပေးပို့ အကြောင်းကြားခြင်း •	mphcloud.com website ၏ ညာဘက် အောက်တွင် ပေါ်နေသော Facebook messenger ဖြင့် ပေးပို့ အကြောင်းကြားခြင်း Membership အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ မှ စတင်ပါမည်။ ထိုနေ့မှ စတင်ပြီး Donation မပြုလုပ်ရသေးပါက မိမိ username and password ဖြင့် Login ဝင်ပြီးပါက စာအုပ်များ၏ information များသာ တွေ့ရမည် ဖြစ်ပြီး Download Link သည် Donated Member ဖြစ်ပြီးမှသာ တွေ့မြင်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ Myanmar Public Health Cloud ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက်သာ ရည်ရွယ်သဖြင့် နိုင်ငံခြားတွင် နေထိုင်သော မြန်မာလူမျိုးများ Donation ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဘဏ်ငွေလွဲရန် အခက်အခဲ ဖြစ်ပါက အထက်ပါ နည်းလမ်းများအတိုင်း အကြောင်းကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
Ann Aschengrau, George R. Seage
Jorn Olsen, Naomi Greene, Rodolfo Saracci, Dimitrios Trichopoulos
Kenneth J. Rothman, Timothy L. Lash Associate Professor, Sander Greenland
Randomization in Clinical Trials: Theory and Practice
William F. Rosenberger, John M. Lachin
Leslie G. Portney, Mary P. Watkins
David A. Freedman, David Collier, Jasjeet S. Sekhon, Philip B. Stark
All materials on this website are for private use and strictly for <strong>EDUCATIONAL PURPOSE only</strong>. No files are hosted on web hosting server and these files are indexed to Cloud Servers. The hosting server or the web administrator cannot be held responsible for the contents of any linked sites or any link contained inalinked site, or change / updates to such sites.
Myanmar Public Health (2013) - All rights reserved. | MPH Cloud